जन्म बारअनुसार कुन पेशा अंङ्गाल्दा हुन्छ फलिफाप ? जान्नुहोस् – Jagaran Nepal
जन्म बारअनुसार कुन पेशा अंङ्गाल्दा हुन्छ फलिफाप ? जान्नुहोस्
काठमाडौं । ज्योतिष शास्त्रले मानिसको भूत, भविष्य र वर्तमानको विषयमा फलादेश गर्छ । शास्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने मानिसको जन्मबारले पनि उसको दैनिक जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । शास्त्र अनुसार कुन बारमा जन्मिएका मानिसले कस्तो पेशा/व्यवसाय गर्दा उसका लागि श्रीवृद्धि हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँ केही जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।